Global Voices teny Malagasy » São Paulo : Vehivavy Mpifindra Monina Miteny Amin’ny Alàlan’ny Amboradara Sy Petakofehy · Global Voices teny Malagasy » Print
São Paulo : Vehivavy Mpifindra Monina Miteny Amin'ny Alàlan'ny Amboradara Sy Petakofehy
Voadika ny 06 Marsa 2016 7:16 GMT 1	 · Mpanoratra MigraMundo Nandika (fr) i Henri Dumoulin, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta
Fampirantiana vaovao ao amin'ny Tranombakoka momba ny Fifindràmonina ao Sao Paulo : tantara maro tantaraina amin'ny alàlan'ireo “arpilleras” Sary : Tranombakoka momba ny Fifindràmonina.
Azo resahana amin'ny alàlan'ny zaitra ve ny lohahevitra iray sarobahàna toy ny an'ny fifindramonina ?
Asehon'ny fampirantiana iray “Miainga avy amin'ireo kofehy mifampiditra ka tonga sary, manambatra indray ny tsiaron'ireo mpifindra monina”, notokanana tao amn'ny tranombakoky ny fifindràmonina ao São Paulo tamin'ny Febroary teo , fa afaka atao tsara izany.
Io no vokatry ny asan'ireo vehivavy avy amin'ny “Casa de Passagem” (trano tetezamita), ny Terra Nova sy ny fiarahamientana “Ry Vehivavy Latino, anisan'ireo eto ianao, aza mihatakataka“, ahitàna ireo vehivavy avy aminà firenena samihafa ao Amerika Atsimo. Asa 17 no natolony, navondrona ho anaty sokajin-dohahevitra efatra : ny làlana nodiavina, ny fahaizamanao, ny fifamatorana ary ny toerana.
Asa notontosaina tamin'ny fampiasàna ilay fomba arpillera, teknika iray fanjairana sy fanaovana amboradara avy any amin'ny faritr'i Isla Negra, ao Shily. Lamba voarary tamin'ny fomba eny ambanivohitra eny no ampiasainy (izay angamba ilay ampiasaina ho harona fitondràna lafarinina na ovy) ary karazana rovidamba isankarazany mifangaro. Avy amin'ireny fitaovana faran'izay tsotra ireny, rehefa mahazo bika avy amin'ny amboradara sy ny tanan'ireo izay mikirakira azy, no tantaraina ny tantaram-piainana sy ny zavatra niainan'ireo mpamorona azy.
Lasa taokanto malaza ny arpillera tany amin'ny taona 70 tany, nandritry ny jadona miaramla nisy tao Shily. Tamin'ny alàlan'ny asany, afaka nasehon'ireo vehivavy ny herisetra, ny fanenjehana sy ny fanampàrana fahefana hafa nataon'ny fitondràna. Saingy niampita ny sisintanin'i Shily io teknika io ary dia nampiasaina taminà vanimpotoana sy toejavatra samihafa tao Amerika Latina.
Ho azo jerena ao amin'ny Tranombakoky ny Fifondràmonina io fampirantiana io hatramin'ny 15 May.
Fihetsehampo tsapa ao anatin'ny amboradara tsirairay
Mandritry ny asa fanjairana, mitafa ireo vehivavy , mizara ny fiainan-dry zareo sy ny zavatra niainany, mifanantona ary mifankahafantatra misimisy kokoa.
“Tsy fantatro mihitsy tamn'izany hoe zavatra iray tena lalina izy io ary hoe tena mahakasika tokoa ny fanahin'ireo izay mijery azy ireny rovidamba ireny. Ambony lavitra noho izany, tsy nahafantatra aho hoe tena vonton'ny fihetsehampon'ireo izay nanjaitra azy izy ireny. Ho ahy ny hoe fizaràna ny fotoana tahaka itony amin'ireo vehivavy avy aminà kolontsaina hafa dia traikefa iray tena mahafapo sy ahazoana tombony”. Izany no hevitr'i Yolanda Jeanette Cortes, vehivavy iray avy ao Shily, iray tamin'ieo mpandray anjara avy amin'ny fiarahamientan'ireo vehivavy izay nanatontosa ampahany tamin'ireo arpilleras naranty.
Yolanda dia niaraka tamin'ny zanany vavy, Jeannette Corte, mpandalina rafitra, izay mitovy fijery amin'ny reniny : “Voamariko fa tamin'ny alàlan'ity asa ity, nentina ny tsirairay mba hisaina ny antom-pisiany, hahatadidy, hiverina hitady indray ireo fihetsehampo izay, mazàna, tsy vitantsika ny maneho azy noho ny antony manokana ho an'ny tsirairay, ny kolontsaina, ny sosialy sy toekarena. Tahotra sy fifaliana mitovy no ananantsika rehetra.” Tamin'ny alàlan'ny ONG Presença de América Latina no nahatongavan'i Jeannette tao amin'ilay atrikasa arpilleras, ONG izay sehatra iasàn'ilay fierahamientan'ny vehivavy avy ao Amerika Latina.
Mientanentana amin'ity zavatra iainany ity ihany koa i Gioconda Elgueta, Shiliana, zavatra izay manome azy fahafahana nanampy tamin'ny famoronana ireo asa naranty. “Zavatra iray mamela ny tsiro mamin'ny finamànana sy ny firaisankina ity. Mampitombo ny harena ananantsika eny amin'ny làlana isian'ny fifanenàna mahafinaritra eny ny fiasàna anaty vondrona miaraka amin'ireo vehivavy efa nahazo taona avy amin'ny fiaviana isankarazany”.
Hazavain'ilay Breziliana, Dalvaci Porto, izay nifindra avy any Bahia ho ao São Paulo tamin'ny 2013, fa izy koa dia nahita fomba hanehoana fihetsehampo sy fifampizaràna traikefa amin'ny olona hafa tao anatin'ny arpillera . “Tamin'ny alàlan'ny arpilleras no nahitàko làlana nahafahako nanangana indray ny tantarako, nihoatra ireo fahatsiarovana navelan'ny lasa ary ny tahotra ananan'ny olona iray izay tsy maintsy manomboka fiainana iray vaovao any aminà tany tsy fantatra ka hanangona ny heriny rehetra mba hahita ny toerany ao anatin'ny fiarahamonina. Nokatsahako ny haneho ny haren'ny kolontsaina iray marolafy avy amin'ny fifangarongaroana teo amin'ireo mpifindra monina sy ny Paulistes. Safotofoto iray tsy mampino teo amin'ny sehatry ny mozika, hainahandro, haisoratra, fomba amam-panao manokana…Faly aho afaka nahazo fotoana iray nandraisana anjara tamin'io”.
Ny hanamafisana ity tetikasa ity no hevitra amin'izao fotoana izao, amin'ny fanangonana olona bebe kokoa avy amin'ny fiaviana samihafa sy andian-taranaka samihafa. “Ny tanjonay voalohany dia ny hiroso hatrany ao anatin'ny sehatr'ity tetikasa fampivelarana ny maha-olona sy ny sosialy ity. Voaporofonay fa ananan'ilay fiarahamientana ny fahafahana manokatra ny fahatsiarovana, ny manamafy ireo fandalinana azo atao amin'ny tantara, ny fiaviana, ary mahatakatra ny hoe afaka misy endrika samihafa any rehetra any izay mampiray antsika anefa, sy manome ilay ‘isika’ iray. Izany no hazavain'ilay Shiliana mpikatroka, Oriana Jara, avy amin'ny ONG Presença da América Latina.
Exposição Do Retrato à trama: costurando memórias migrantes ( Miainga avy amin'ireo kofehy mifampiditra ka tonga sary, manambatra indray ny tsiaron'ireo mpifindra monina)
Fisokafana: ny 13 Febroary amin'ny 11 ora hatramin'ny 15 May 2016
Toerana : Tranombakoky ny Fifindràmonina – Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – Mooca, São Paulo (SP)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/03/06/79969/
 notokanana tao amn'ny tranombakoky ny fifindràmonina ao São Paulo tamin'ny Febroary teo: http://museudaimigracao.org.br/museu-da-imigracao-reune-trabalhos-de-costura-e-bordado-de-mulheres-migrantes/